Imibuzo Evame Ukubuzwa - VTECH CHINA Co., Ltd.
Yebo, Inani elincane le-oda lamamaski alahlwayo ngokuvamile liyizingcezu ezingama-5000.
Ngingakwazi ukuthenga amasampula afaka ama-oda?
Yebo, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi.
Kungani ukhetha i-VTECH?
Sinezinzuzo eziyinhloko ezingu-5:
1) Umkhiqizi weMask ochwepheshe we-KN95 olahlwayo.
2) Izintengo ezinengqondo, nikeza izaphulelo ngenani le-oda.
3) Can egcizelele izidingo zakho.
4) Iwaranti yekhwalithi kanye nenkonzo Ephelele yangemva kokuthengisa.
5) Imigqa yokukhiqiza ephumelelayo kanye nenani lokukhiqiza elizinzile.